ဧရာဝတီ ကို ကာကွယ်ကြပါစို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » ဧရာဝတီ ကို ကာကွယ်ကြပါစို့
ဧရာဝတီ ကို ကာကွယ်ကြပါစို့
Posted by True Answer on Sep 13, 2011 in Community & Society |9comments
မြစ်ဆုံရေကာတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်းတွေ၊ ဆောင်းပါးတွေကို နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ဖတ်နေတွေ့နေရပါသည်။
ဖတ်ခဲ့ရသည့် သတင်းတွေအရ ဒီရေကာတာတွေအတွက် တရုတ်ရဲ့  ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာ မနည်းပါ။
အဲဒီ့အတွက်ကြောင့် တရုတ်ဘက်ကလည်း လက်ရှိအနေအထားအထိ ကုန်ကျခဲ့တဲ့ သူတို့ ရဲ့  အရင်းအနှီးတွေ မဆုံးရှုံးစေရေးအတွက် ဒီစီမံကိန်းကို တော်ရုံနဲ့ နောက်ဆုတ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ ကြားထဲကကို အလျော့မပေးဘဲ ဆက်လက်ပြီးတော့ ဆောက်လုပ်နေဆဲပါ။
တရုတ်က သူတို့ရဲ့  ငွေအရင်းအနှီး ကိုတောင် မဆုံးရှုံးအောင် ကြိုးစားနေကြပါတယ်။
မြန်မာတွေ ဘက်ကရော ?
ပထမဆုံး ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် မြေနေရာတွေရှင်းလို့ မြန်မာ့တောတွေ ဆုံးရှုံးနေပြီ ( ရှင်းလိုက်တဲ့သစ်တွေ ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ )
တောတွေမရှိတော့ တောထဲနေရတဲ့ ရှားပါးတိရိစ္ဆာန်တွေကိုလည်း ဆုံးရှုံးနေပါပြီ ( ဒေသခံတွေ သွားလာခွင့် မရတော့တဲ့ နေရာတွေက ရှားပါးတိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့  အရေ၊ အရိုး ၊ အဆွယ် တွေ ဘယ်ရောက်ကုန်မှာလဲ )
ဥတုရာသီတောကိုမှီ၏ ဆိုတဲ့အတိုင်း တောပြုန်းတဲ့ ဒေသ ရာသီဥတု ဆုံးရှုံးဖို့ သေချာနေပါပြီ ။
ဒေသခံတွေ သောင်းချီ ရွှေ့ ပြောင်းရလို့ နေရာအရပ်တွေ ဆုံးရှုံးနေပါပြီ ။
ထို့ထက်ပို၍ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ဆုံးရှုံးစေမည်။ ( စီမံကိန်းမှာ ပြည်တွင်းအလုပ်သမားနဲ့ တရုတ်အလုပ်သမား အရေအတွက် ဘယ်ဟာပိုများနိုင်ပါသလဲ၊ လောလောဆယ်တော့ ဒေသခံတွေရဲ့  နေရပ်တွေမှာ တရုတ်အလုပ်သမားအဆောက်အဦးတွေ အစားထိုးနေပါပြီ )
အဆိုးဆုံးကတော့ မြစ်ဆုံဒေသ ဆုံးရှုံးတာပါ။
မြစ်ဆုံဒေသဟာ ကချင်လူမျိုးတို့၏ နှလုံးသည်ပွတ်ပမာ တန်ဖိုးထားရာနေရာဖြစ်ရုံမက မြန်မာအမျိုးသားတို့၏ ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဖိုးတန် သဘာဝအလှတရား။
မေခ၊ မလိခ မြစ်ဆုံနေရာဟာ တန်ဖိုးထား ထိန်းသိမ်း စီမံတတ်မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံခြားဝင်ငွေ အမြောက်အမြား ရှာဖွေပေးရာ ဒေသ ဖြစ်လာမှာ မလွဲပါ။( တရုတ်လက်ထဲ ရောင်းစားသည့်နည်းလမ်းကို မဆိုလိုပါ )
မြစ်ရေနည်းခန်းခြောက်ခြင်းဟာ ရေကာတာတွေကြောင့်ချည့်ပဲ မဟုတ်ဟု အချို့ က ပြောကြသည်။
ခန်းခြောက်ပျက်စီး သွားသော မြစ်ဝါ၊ ယန်စီ ၊ Pearl ၊ Huai ၊ Songhua Hai နှင့် Liao မြစ်တိုင်းမှာတော့ ရေကာတာစီမံကိန်းတွေရှိကြသည်။ ( တိုက်ဆိုင်မှုဆိုလျှင် ဤအရေအတွက်မျှ တိုက်ဆိုင်ပါ့မလား )
ထိုမြစ်ကြီးများနည်းတူ မြန်မာပြည်၏ ဧရာဝတီမြစ်ကြီးကို ဆုံးရှုံးရန်မှာ ဖြစ်နိုင်ချေများလွန်းသည်။
ဧရာဝတီမြစ်ကြီးနှင့်အတူ ဆုံးရှုံးရမှာတွေက များလွန်းလှသည်။
မြစ်ဆုံဒေသနှင့် ဧရာဝတီမြစ်ကြီး မဆုံးရှုံးစေပဲ မြန်မာပြည်ကြီး လျှပ်စစ်မီးဖြင့် လင်းထိန်နိုင်သော အခြားနည်းလမ်းများလည်းရှိပါသေးသည်။
တရုတ်ဘက်က ငွေအရင်းအနှီးတစ်ခုတည်း ဆုံးရှုံးမှာကို ကြောက်လန့်တကြား ကာကွယ်နေကြစဉ်မှာ၊
မြန်မာဘက်က မြောက်မြားလှစွာသော ဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်နေ/ဖြစ်နိုင် သည်ကို ကိုယ်နှင့်မဆိုင်သလို လက်ပိုက်ကြည့်နေမည်ဆိုလျှင် အလွန်ရှက်ဖွယ်ကောင်းလှသည်။
တရုတ်သမ္မတ ဟူဂျင်တောင်း ထံသို့ မြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းအား ကန့်ကွက်ကြောင်းကို အောက်ပါ link တွင် လက်မှတ်ရေးထိုး၍ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
မြစ်ဆုံဒေသနှင့် ဧရာဝတီမြစ်ကို ကာကွယ်ခြင်းသည် ပါတီနိုင်ငံရေးမဟုတ်။
နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ထံသို့ ဧရာဝတီမြစ်ကြီး မတိမ်ကောမပပျောက်စေရေးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်သူပြည်သားများ၏ အသက်အိုးအိမ် မပျက်စီး၊ မဆုံးရှုံးစေရေးအတွက် မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းကို ရပ်ဆိုင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံလွှာတွင် သင်လည်းလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းဖြင့် ပါဝင်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
မှတ်ချက်။ သဂျီးမင်းခင်ဗျား ဖော်ဝပ်မေးလ်က ရရှိခြင်းဖြစ်သော်လည်း ဧရာဝတီအကျိုးငှါအတွက် တင်လိုက်ပါသည်။
ထူးအိမ်သင် ဆိုလိုက်ကတည်းက တစ်ခုခု ဖြစ်တော့မယ်လို့ ထင်ခဲ့ရမှာ
အခုတော့ နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ တွေ့ရတော့မှ
သြော် (နောင် တစ်ချိန်မှာ မွေးဖွားလာမယ့် မြန်မာပြည်သားတွေအတွက် ရာဇ၀င်ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲမှာပဲ ကျန်ခဲ့တော့မယ့်) ရာဇ၀င်ထဲက သတို့သမီး ပါလား
ကျွန်မတရုတ်ပြည်မှာရှိနေတုန်းက အဲဒီက တရုတ်ပညာရှင်တစ်ယောက်နဲ့ ဧရာဝတီကိစ္စ စကားများခဲ့ရဖူးတယ် … အဲဒီတရုတ်ကြီးကို ဒေါသတော်တော်ထွက်မိလို့ တော်တော်လေး ပြောဆိုပစ်ခဲ့သေးတယ် …. သူတို့ကပြောတာကတော့ မြန်မာပြည်အတွက် အများကြီးအကျိုးရှိတယ်ပေါ့လေ … သူတို့လုပ်ပေးတာကိုတောင် ကျေးဇူးတင်ရမှာတဲ့ …. တရုတ်ကြီးကတော့ အချက်ကျကျ ပြန်ချေပခဲ့ပေမယ့် ကျွန်မကတော့ ဘာသာစကားမကျွမ်းကျင်တာရော၊ ဆောက်လုပ်ရေးကိစ္စနားမလည်တာရောနဲ့ နောက်ဆုံးအရှုံးပေးလိုက်ရတယ် …
”တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှ မြစ်ဆုံရေကာတာ တည်ဆောက်လုပ်ငန်းများသုံး ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းများ တင်သွင်းလာခြင်းကို ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO ထိန်းချုပ်နယ်မြေ တပ်ရင်းများမှ ပိတ်ထားကြောင်း KIO ပြောခွင့်ရှိသူ ဦးလနန် ကပြောသည်။ ကချင်ပြည်နယ် အရှေ့ဘက် ဝိုင်းမော်၊ ကန်ပိုင်တီ လမ်းကြောင်းမှတဆင့် တရုတ်ပြည်က တင်သွင်းလာသော ဘိလပ်မြေနှင့် သံထည်ပစ္စည်းများကို KIO ဒေသခံ တပ်ရင်းများ ထိန်းချုပ်သည့် တပ်ရင်း (၃) လဖိုင် ဂိတ်က တင်သွင်းခွင့် ပိတ်ထားခြင်းကြောင့် မြစ်ဆုံဆည် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ ရပ်တန့်နေသည်ဟုလည်း ဦးလနန်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။”
တရုပ်တွေ ဘက်ကSource confirmationလေး..ကျနော်သိချင်နေပါတယ်….သိရင်လင့်လေးညြွှန်းပေးနိုင်မလား
“ပထမဆုံး ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် မြေနေရာတွေရှင်းလို့ မြန်မာ့တောတွေ ဆုံးရှုံးနေပြီ ( ရှင်းလိုက်တဲ့သစ်တွေ ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ )
တောတွေမရှိတော့ တောထဲနေရတဲ့ ရှားပါးတိရိစ္ဆာန်တွေကိုလည်း ဆုံးရှုံးနေပါပြီ “ဒါတွေတင်မကသေးပါဘူး မြေကြီးထဲကထွက်တဲ့ သဘာဝတွင်းထက်သယံဇာတတွေ(ဥပမာ ရွှေ၊သတတ္တု၊ကျောက်သံပတ္တမြား) အဲဒါတွေအားလုံး တရုတ်ပြည်ကိုရောက်ကုန်ပါပြီ ကချင်ပြည်နယ်ဟာ သဘာဝတွင်းထွက်သယံဇာတအပေါ်အကြွယ်ဝဆုံးပြည်နယ်တစ်ခုပါ ၀င်ထွက်လိုက်တဲ့ကားကြီး ကားငယ်တွေ မြန်မာပြည်ကလမ်းတွေ မပျက်စီးပဲရှိပါတော့မလား ဖြစ်လိုက်တဲ့ယာဉ်တိုက်မှုတွေကလည်း ၀ုန်းဝုန်း ဒိုင်းဒိုင်း အုန်းအုန်းဆိုပဲ
သစ် — အပင်ကြီးတွေ ကုန်ပြီ နောက် အပင်တွေ ကြီးလာမှ ပြော ။
ကျောက်စိမ်း — ထပ် မ၀ယ်ချင်တော့ဘူး (ကောင်းတာတွေ ကုန်သွားလို့)
ရေနံ — ရသလောက် ယူဦးမှာ ။
ဓါတ်ငွေ့ — သူများကို ရောင်းရဲရင် ရောင်းကြည့် ဘာမှတ်လဲ ။
ကား — ဈေးမဆစ်နဲ့ ယူထားနော် (သွားဖြဲမကြည့်နဲ့ ချိုကျိုး နားရွက်ပဲ့ .. အပိုပစ္စည်းရှား .. ဈေးကြီး) ။
အထည် — ဈေးပေါတယ်နော ယူထား ။
ပလတ်စတစ် — ယပက်လက်ထက် ဈေးပေါတယ် နော ယူ ထား မမှားဘူး ။
နိဗ္ဗာန်ရောက်မလားလို့ ကြိုးစားတာတွေ တရားအားထုတ်ပါလို့ ပြောခဲ့တဲ့စကားကြောင့် အခုတော့ ခက်ကုန်ပြီ
လေ့လာဆန်းစစ်မှုများအရ ဆည်ကြီးများရဲ့ သက်တမ်းဟာ ပျမ်းမျှ ၂၂နှစ်ဝန်းကျင်သာရှိပါသတဲ့။
ဆည်ကျိုးတာ၊အက်တာ အပြင် နုန်းတွေ အနည်ထိုင်သွားတာတွေကြောင့် ၂၂နှစ်နောက်ပိုင်းမှာ သုံးစားမရတော့ပါဘူးတဲ့။ ကဲ ၉၀% ပေးပြီး ကိုယ့်အရင်းအမြစ်ကို အနှစ် ၃၀ပေးသုံးသင့်သလား။